#1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
#Muqdisho: Amniga Oo Faraha Kasii Baxaya Xilli Uu Hadheeyay Khilaaf Siyaasadeed
Muqdisho(ANN)-Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilligeedu dhammaaday, ayaa weli ku adkaysanay in ay kulamo la yeelanay oo ay sii waday wadahadaladii fashilmay ee u dhexeeyay siyaasiyiinta la baxay madasha murrashaxiinta.
Sidaana, waxa lagu sheegay war kasoo baxay xafiiska ra;iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlaya arrintaa.
Afhayeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucalimow, ayaa sheegay in Ra’iisal Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ee xilka sii hayaa uu diyaar u yahay si wadidda wadahadallada siyaasiyiinta murrashaxiinta.
Warka Ra’iisal Wasaaraha
Qoraal soo saaray Afhayeenku, ayuu ku sheegay in Rooble uu mar kasta diyaar u yahay sii wadida wadahadalladii u dhexeeyay Midowga Murrashaxiinta, taas oo sida uu sheegay la doonayo in si guud iyo si gaar gaar ahba, loona gaadho heshiis.
“Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu mar kasta diyaar yahay sii waddida wadahadalladii si loo gaadho hishiis iyo is afgarad ,dalkuna uu doorasho u aado” ayuu yidhi, Macalimow.
Hadalka afhayeenka, ayaa yimi kaddib markii Khamiistii lasoo dhaafay uu burburay heshiis hore u dhexmaray Xukuumadda Rooble iyo Murrashaxiinta.
Heshiiskaa, ayaa nuxurkiisu ahaa oo la isla qaatay in la qabto banaanbax ay ku baaqeen Murrashaxiinta,wallaw uu dhicisoobay, kaddib markii sida ay sheegeen aan lagu aamini karin xukuumadda dadka ka qaybgelaya.
\_Sidaa awgeed midawga murrashaxiinta ayaa si cad u sheegay in ay joojiyeen isu soo baxa loo balansanaa oo aanay cayimin xilliga ay dib ugu dhigeen.
Soomaaliya, waxa hadheeyay khilaaf siyaasadeed oo ka taagan qaabka loo qabanayo doorasho, iyadoo ay arrintaa isku maandhaafeen xukuumadda, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta la baxay madasha murrashaxiinta.
Khilaafka Iyo Amniga
Khilaafka, ayaa sii kordhiyay amniga oo maalinba maalinta ka danbaysa sii xumaaya, iyadoo qaraxyo iyo dilal qorshaysan ay hadheeyeen caasimada magaalada Muqdisho maalmihii u danbeeyay.
Qaraxii ugu xumaa ee maalmlahan ka dhacay, ayaa ahaa mid lala beegsaday habeenkii Jimcaha ee Todobaadkan maqaaxi ku taal duleedka Dekedda Muqdisho, kaas oo sababay ugu yaraan dhimashada 20 qof iyo 30 dhaawac ah oo isugu jira saraakiil dawladda ah, shaqaale iyo dad shacab ah.